Utholwe esonakele okusolwa ukuthi ubulawe yizesheli - Ilanga News
Home Izindaba Utholwe esonakele okusolwa ukuthi ubulawe yizesheli
Utholwe esonakele okusolwa ukuthi ubulawe yizesheli
Kuthiwa bakwenze lokhu ngoba becikwa wukuthi uqome omunye emndenini wabo kanti nabo bebemfuna
SITHOLWE sesiqala ukonakala isidumbu sikaNkz Philile Mabika (23) okusolwa ukuthi ubulawe ngabafana bakwamakhelwane bedinwa wukuthi uqome umfowabo besamfuna nabo.
KUSOLWA abesilisa ababili bakwamakhelwane ngokubulawa kowesifazane wakwaMabika eNdlondlweni, eManguzi, okuthiwa lokhu bakwenze ngoba waqoma omunye wasemndenini wabo kanti nabo bebemfuna kodwa ucu lwangahlangana.
Isidumbu sikaNkz Philile Mabika (23), sitholwe ngumnikazi wesitolo sasendaweni sesiqala ukonakala ngo-Lwesihlanu olwedlule emuva kokuba wanyamalala ngoLwesithathu ephuma ukuyothenga kuso lesi sitolo ntambama.
Kubikwa ukuthi wayehamba nengane yakubo encane, eyajika endleleni yagoduka emuva kokuba omunye wabasolwa eyiyalele kanjalo.
ILANGA lithole ukuthi umnikazi wesitolo ufike khona ngoLwesihlanu waxakwa yiphunga elingajwayelekile, kwathi uma ebheka wabona indunduma yamapulangwe emboze isidumbu.
Uhlabe umkhosi, kwabizwa amaphoyisa ngokushesha. Isidumbu sitholwe sikopolotwe amehlo, sisikwe esiswini, sinqunu sinezimpawu zokunukubezwa ngokocansi. Emuva kokutholwa kwesidumbu, kuthiwa ingane eyayihamba noNkz Mabika iveze ukuthi umsolwa wokuqala obeyisesheli sakhe, nguyena owayiyalela ukuba igoduke ngoba ufuna ukuxoxa naye.
Uninalume kamufi, uMnu Lucas Mabika, utshele ILANGA ukuthi umshana wakhe ubulawe ngabafana bakwamakhelwane ngoba bedinwa wukuthi uqome umfowabo ekubeni nabo bebesamfuna.
“Ubejola nomfana wakwamakhelwane. Kuthiwa lona osolwa ngokumbulala ungumfowabo wesoka lakhe, ukwenze lokhu ngoba ecikwa wukuthi uqome umfowabo ekubeni naye ubemfuna. Okubuhlungu wukuthi lo msolwa uke wafonela ingane encane eyibuza ukuthi isizweni ngoPhilile.
“Ngabe kungcono ukuba umdlwengule wamyeka kanjalo kunokuba amdabule ngommese esiswini, amkopolote namehlo. Ibuhlungu into eyehlele umndeni wakwaMabika,” kusho uMnu Mabika.
Uveze ukuthi usethole ucingo oluvela emaphoyiseni kuthiwa abasolwa ababili ekufeni komshana wakhe, bacele imvume emaphoyiseni ukuze bayoxolisa emndenini kamufi. Uthi akabadingi, ufisa sengathi nomndeni wabo ungathutha endaweni.
“Ngeke ngikwazi ukuhlalisana nomndeni ongibulalele umshana wami, umuzi wakubo siqhelelene nawo ngamamitha awu-100,” kusho uMnu Mabika.
Ikhansela lendawo, uMnu Enough Sithole, lithe seziyinsakavukela kule ndawo izigameko zalolu hlobo maqede kungaboshwa muntu. Uthi noma ngabe kukhona oboshiwe, kodwa ubuye adedelwe ngaphandle kokuxhumana nomphakathi nemindeni yezisulu.
Uthe isigameko sakamuva ngesokulalelwa unyendle kwentombazane ebiya esikoleni, izigilamkhuba zayinukubeza emuva kwalokho zayibopha ngothayi wesikole.
“Ngikhuluma nje labo bafana bangaphandle, akekho owaziyo ukuthi badedelwa ngaliphi. Nakuso lesi sigameko kuthiwe abasolwa basayophenywa. Kwesinye nje isigameko, omunye ubaba ohlala yedwa usanda kudlwengula ingane. Nokho kwaxhunyanwa namaphoyisa amthatha esingazi-ke ukuthi icala lakhe lihamba kanjani,” kusho uMnu Sithole.
INkosi yesizwe sakwaTembe, uMabhudu Tembe, ithe: “Ngemuva komngcwabo sizongenelela kulesi simo, ikakhulukazi phakathi kwemindeni emibili ukuze kungadaleki uqhekeko olukhulu ngenxa nje yezingane.
“Ngaphambi kokuba sifinyelele kokufiswa yinhliziyo kaMnu Mabika, sizoqala ukuxoxa nabo bonke ngoba siyakuqonda ukuthi umuntu ukhuluma noma ngabe yini uma ethukuthele. Khona kubuhlungu ukulahlekelwa yingane ngalolu hlobo. Masethembe ukuthi nezinkantolo zizoluphatha kahle lolu daba,” kusho iNkosi Tembe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa aseManguzi aphenya mayelana nokutholakala kwesidumbu sowesifazane silahliwe eNdlondlweni.
Uthe kuboshwe umsolwa oyedwa oneminyaka ewu-33 ubudala wavela kafushane eNkantolo yeMantshi yaseManguzi ngoLwesibili. Uzobuyela maduze nje eyofaka isicelo sebheyili.
Previous articleBadidekile kuvalwa umcimbi kuneminxa engamenyezelwe
Next articleBekucwebile emabhishi aseThekwini